Sakafo dimy manatsara ny fiasan’ny aty – jEreo Ato
Sakafo dimy manatsara ny fiasan’ny aty
Publié le 25 juin 2019 25 juin 2019 - 3 minutes de lecture Catégories SantéÉtiquettes Aty
Ny aty dia anisan’ny taova lehibe indrindra ao amin’ny vatana. Ho an’ny olon-dehibe dia milanja 1,5 kilao izy io. Ny fahasalamany dia zava-dehibe tokoa amin’ny fiainana sy fahavelomantsika. Raha lazaina fohy dia ny aty no maka, mamadika sy mampahatonga izay poizina mety tafiditra any anaty any tsy hahafaty.
Tsy azo tsinontsinoavana araka izany ny fahasalaman’ny aty. Ireto ary misy torohevitra vitsivitsy, sakafo dimy azontsika hanina mba hanatsaratsara kokoa ny fiasan’ny atintsika.
Desera matsiro tokoa ny zavoka, sady manome hoditra tsara izay mampiasa azy. Tsy latsa-danja anefa ny soa entiny ho an’ny aty. Manampy be amin’ny fanasitranana ny fahasimban’ny aty izy.
Ny tongolo gasy
Tongolo gasy na lay
Ny tongolo gasy na tongolo lay dia manampy ny aty amin’ny famongorana ny poizina tafiditra any amin’ny vatana. Ahitana “sélénium” sy “allicine” ihany koa izy io, izay manampy ny aty amin’ny fanesorana ireo poizina ireo (Izay ilay antsoina hoe : détoxification).
Ankoatr’izay dia antibiotika voajanahary ny tongolo lay izay manampy amin’ny famerenana indray ny aty tsy salama na nisy poizina.
Episy be mpankafy ny tamotamo, ary izay indrindra no ndeha hanararaotana ny hampiasa azy ho an’ny fahasalamana. Ny tamotamo dia miaro ny aty amin’ny voka-dratsy sasany ateraky ny fanafody.
Ahazoana tombontsoa maro ny tamotamo
Fanampin’izay dia ilaina amin’ny fiadiana amin’ny aretina maro ny tamotamo noho izy anisan’ny “antioxydant” sy “anti-inflammatoire”. Tsara indrindra izany ny manisy tamotamo ny sakafo ao an-trano ao.
Tsy atao betsaka loatra ny fisotroana kafe.
Maro amintsika Malagasy no misotro kafe. Ahazoana tombontsoa tokoa izy io raha ny aty no lazaina. Araka ny fandinihina nataon’ny manam-pahaizana dia ny fisotroana kafe roa tasy isan’andro dia mampihena ny mety hahazoana aretin’ny aty amin’ny ampahany 44 isan-jato. Na eo aza izany rehetra izany dia tsara raha lanjalanjaina ihany ny fisotroana azy io.
Mamy sy soa ny pamplemosy
Voankazo manana ny fiavahany ny pamplemosy. Ahitana singa atao hoe ” naringinine “ izy, izay manome tosika ny aty amin’ny mba tsy hitazona ny tavy fa handoro izany.
Ankoatr’io dia manampy hisoroka ny fahasimbana mety hahazo ny aty io voankazo volomboasary io.
Torohevitra ihany ireo naroso antsika ireo fa ny tsirairay no mandanjalanja ny sakafo haniny. Ilaina ihany koa ny fampiarahana izany amin’ny fanatanjahan-tena. Tsy atao ambanin-javatra ihany koa ny mamonjy mpitsabo raha misy ny mampanahy ny fahasalamana.
Mirary soa ho antsika rehetra ary e.
Législatives : L’IRD gagne la majorité absolue à Tsimbazaza
Ocean Dream : le bateau de croisière a fait escale à Fort Dauphin
Exhumation des morts en Indonésie: impressionnante ou effrayante?
Passation de pouvoirs à Andry Rajoelina hier et investiture aujourd’hui
Un énorme poisson-lune échoué sur une plage en Australie